Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Suudaan oo maanta Khartoum ku kulmay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan booqasho ku jooga dalka Suudaan ayaa maanta magaalada Khartoum kula kulmay dhiggiisa dalka Suudaan mudane Cumar Xasan Al-Bashiir.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka ee Soomaaliya mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed oo ka mid ah wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in kulanka labada madaxweyne lagaga wada hadlay sii xoojinta xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sidoo kale sheegay in lacag ay dowladddi KMG aheyd ee Soomaaliya horay uga dalbatay inay u daabacdo dowladda Sudan ay hadda diyaar tahay, laguna heshiiyay inay Sudan sii heyso tan iyo inta laga tayaynayo laamaha maaliyadeed ee dowladdda Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay inay ay labada madaxweyne ka arrinsadeen sidii Sudan ay uga qeyb qaadan laheyd taageerada ay dowladda Soomaaliya ka fileyso caalamka, si ay dowladdu u noqoto mid iskeed isu taagta oo ku guuleysata howlaha hor yaalla.
Wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh, oo shalay Sudan gaaray ayaa la rajeynayaa in ay berry dalka dib ugu soo noqdaan.